ဘာသာညီအစ်ကိုများ ( ရွှေကျင်သာသနာပိုင် ဝါဆို ဆရာတော်ဘုရားကြီး) | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဗမာ အစိုးရ နှင့် ဝီရသူ ရဲ့ ၉၆၉ ပါတီ တို့ ရဲ့ ကြံစည်မှု
မန္တလေးတိုင်း ပြင်ဦးလွင်မြို့တွင် ၉၆၉ ဗုဒ္ဓဘာသာ အကြမ်းဖက်ဂိုဏ်း လှုပ်ရှားမှု »
ဘာသာညီအစ်ကိုများ ( ရွှေကျင်သာသနာပိုင် ဝါဆို ဆရာတော်ဘုရားကြီး)
((သက်တော် ၉၆နှစ် ဝါတော် ၇၆နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော ရွှေကျင်သာသနာပိုင် ဝါဆို ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ကလောင်အမည် မန္တလေးဘုန်းကြီး အမည်ဖြင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး နှိုးဆော်ချက်။ ဆရာတော်ထံမှ ဖြန့်ချိရန် ခွင့်ပြုချက်အရ ပြန်လည် ဝေမျှပါသည်))
ခရစ်ယာန်ဘာသာ ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၊ ဟိန္ဒူဘာသာ ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ ဟူသော ဘာသာကြီးလေးရပ်အနက် ကမ္ဘာ့ လူဦးရေ သန်းပေါင်း ခြောက်ထောင်ရှိရာ ခရစ်ယာန်ဘာသာ သန်းပေါင်း နှစ်ထောင့်တစ်ရာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ သန်းပေါင်းတစ်ထောင့်သုံးရာ ၊ ဟိန္ဒူဘာသာ သန်းပေါင်းတစ်ထောင် ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ သန်းပေါင်းသုံးရာ ခုနှစ်ဆယ့်ခြောက်သန်းစာရင်းကို တွေ့ ဖုး၏ ။
ကျန်ဦးရေ တစ်ချို့ ဘာသာမဲ့ နေကြ၏။ တစ်ချို့ နတ်ကိုးကွယ်၏။ ဤသို့ ကြားဖူး၏။ ကမ္ဘာ့တိုက်ကြီးလေးတိုက် အာရှတိုက်၊ ဥရောပတိုက် စသည် ကမ္ဘာအရပ်ရပ် ဘာသာစုံပြန့် နှံ့ လျှက်ရှိ၏။ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ အတွက် ဗုဒ္ဓဘုရားက မေတ္တာကို အထူးဦးစားပေး ဟောခဲ့ သော်လည်း တစ်ချို့ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ သည် ဘာသာခြားတို့ အပေါ် မေတ္တာမထားနိုင်ကြဘဲ မုန်းတီးရေးဝါဒကို ဖန်တီးလိုကြ၏။
ဘဝရှင်မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးလက်ထက် ဘာသာခြားတို့ သည် မန္တလေးမြို့ ကစ၍ အလျှို အလျှို ဝင်ရောက်လာကြ၏။ တားမရ ဆီိးမနိုင်ဖြစ်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဝါဒ မေတ္တာ ကရုဏာကို လက်သုံးပြုလျက် သေနတ်ပစ်အတတ် ၊ အမြောက်ပစ်အတတ်ကို တတ်မြောက်ရန် သင်ကြားစေကာ တတ်မြောက်သည့် အခါ ကာကွယ်ရေးဌာန ဝန်ထမ်းလုပ်စေလျှက် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မွတ်စလင်မ်လူမျိုးတို့ ကို သိမ်းသွင်း စည်းရုံးထားသည် ကြားဖူး၏။
ရှေးအခါထိုစဉ်က ဈေးချိုအရှေ့ ဘက်ကိုပင် အမြောက်တန်းဟု ခေါ်တွင်စေလျက် မွတ်စလင်မ်လူမျိုးတို့စုရုံးနေထိုင်ကြ၏။ ၁၂၄၇- ခုနှစ်၊ မြန်မာသက္ကရာဇ် အင်္ဂလိပ်မင်း အုပ်ချုပ်သည့် အခါ မွတ်စလင်မ်ခေါ် အစ္စလာမ်လူမျိုး ခရစ်ယာန်လူမျိုးတို့ပိုမိုများပြားလာ၏။ မြန်မာအမျိုးသမီးတို့ဘာသာခြားလူမျိုး၊ နိုင်ငံရပ်ခြားလူမျိုးတို့ နှင့် စုလျားရစ်ပတ် လက်ထပ်ထိမ်းမြားကြ၏ ။ ဘာသာခြားလူမျိုးများပြားလာ၏ ။
အလွန်ကြည့်ကောင်းသော ရူချင်ဖွယ် မြန်မာပြည်ကို သုံးသပ်ကြည့် ရူရာတွင် ၁၂၈၂ – ခုနှစ်ဆီလောက်က ပညာရေးတိုက်ပွဲများ အောင်မြင်စပေါ်လာသည်။ အင်္ဂလိပ်မင်း ဘုရင်ခံလက်အောက် နေရစေကာမူ အမျိုးရေး ၊ ဘာသာရေး ၊ သာသနာရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားလာ၏။ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၆၀ – ဖွား ၆၁ -ခု ဖွားတို့ ကအစ အင်္ဂလိပ်ကျောင်းထွက်တို့ သည် မျက်စိပွင့်လာကြ၏ ။ နှလုံးရည်တိုက်ပွဲပေါ်ထွန်းလာ၏ ။ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ အစည်းတွေ များပြားလာ၏ ။ အထူးအားဖြင့် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၇၁-ခု၊ ၇၂-ခု၊ ၁၂၇၃-ခု ဝန်းကျင်နှစ်များတွင် မွေးဖွားလာသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ယောက်ျားအာဇာနည်ဖြစ်လာကြ၏။
ထိုဖြစ်ရပ် အတောအတွင်း ထိုနှစ်များ အတောအတွင်း မြန်မာ့ခေါင်းဆောင် ဆရာကြီး ဦးရာဇတ် လွတ်လပ်ရေး ဗိသုကာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့သမိုင်းကို စိတ်ထဲတွင် ထင်းထင်းကြီးပေါ်နေ၏ ။ ဒီးဒုတ်ဦးဘချို၊ ဖေ-ပု-ရှိန် မန္တလေး ဦးဘဦး စသည် အလွန်အားကိုးရသော နုိင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ အမြဲသတိရ ဂုဏ်ကျေးဇူးအောက်မေ့ပါ၏။
အလွန်တက်ကြွ ကြီးကျယ်သော ရဟန်းရှင်လူပြည်သူအများ အလွန်ညီညွတ်သော နဝမကွန်ဖရင့်ကြီ်းဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်တိုက်ပွဲ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ အစည်းအဝေးကြီး မန္တလေး တာရဲတန်းတွင် ခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်ဆိုသည်မှာလည်း ထိုခေတ် ထိုနှစ်ဆီကပင်ဖြစ်၏ ။ ( နဝမ ကွန်ဖရင့်အကြောင်းကို မှတ်တမ်း မှတ်ရာပြုမယ်ဆိုလျှင် ဘုန်းကြီးများ မတတ်နိုင်ပါ။ မရေးနိုင်ပါ။ ထိုမှတ်တမ်းသမိုင်းများကို ရှာဖွေလှန်လှော ကြည့်ကြပါဟု တိုက်တွန်းလိုက်ပါ၏။
ထိုလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ နဝမကွန်ဖရင့်၏ အထူးခြားဆုံးဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို အထူးပြောကြားလိုသေး၏။ ထိုပွဲကြီးကို မန္တလေး လေးပြင်လေးရပ် သံဃာပေါင်းစုံ၊ တိုက်ပေါင်းစုံ ပါဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခု၊
နောက်တစ်ခုကို အထူးသိစေလိုသည်မှာ မန္တလေး မြန်မာ တရုတ် ကုလား မွတ်စလင် စသောလူမျိုးစုံ၏။ ဤလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကြောင့် အင်္ဂလိပ်အစိုးရသည် မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးပေး စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဆိုသော သမိုင်းကြောင်းကို ဖွင့်ဆိုလိုက်ရပေ၏။
ရန်ကုန်ယူနီဗာစီတီ တက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းတက်နေသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ဆရာကြီးဦးရာဇာတ်တို့ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးရဘို့ မကြာခဏ ဆွေးနွေးကြသည် ကြားဖူးရ၏။
သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး တူညီသော အယူအဆ ဆန္ဒကိုဖော်ပြရမည်ဆိုလျှင် –
၁။ ငါတို့ မြန်မာပြည်မှာ မွေးဖွားတယ်
၂။ ငါတို့ မြန်မာထမင်း အဟာရကို စားသုံးတယ်
၃။ ငါတို့ မြန်မာပြည်မှာ ကျောင်းနေတယ်
၄။ ငါတို့ မြန်မာပြည်မှာ နေထိုင်သူဖြစ်တယ်
၅။ ငါတို့ အလုပ်သည် မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးရဘို့ လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ ဤသို့နှစ်ဦးလုံးစိတ်ထားခြင်း တူကြ၏။
ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်သည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပေါ် အလွန်ယုံကြည် အားကိုသလို ဗိုလ်ချုပ်အောင်းဆန်း ကလည်း ဆရာကြီးအပေါ် အလွန်ယုံကြည်အားကိုးသည်။ ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်သည် အထက (၂) ရှေးယခင် နေ ရှင်နယ်အမျိုးသားကျောင်းအုပ်ကြီးဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်ရေးလမ်းစ ပျိုးခင်းထောင်ခဲ့ပုံမှာ နေရှင်နယ်ကျောင်းကြီး၌ “ရဲညွန့်တပ်ဖွဲ့” ဖွဲ့စည်းလျှက် လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကို လျှို့ဝှက်ဖွဲ့စည်းတည်ခင်းကြသည် နောက် အင်္ဂလိပ်အစိုးရ ရဲညွန့်တပ်ဖွဲ့ ရုပ်သိမ်းစေ၍ တားမြစ်သည်ကို လက်ခံလိုက်ရသည်။
ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်သည် မိတ္ထီလာဇာတိသား ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် နတ်မောက်ဇာတိသားဖြစ်၍ တစ်မြေ တည်းနေ တစ်ရေတည်းသောက် တစ်ခရီးတည်းသွားကြသော အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး နှစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ (သူတို့နှစ်ယောက်လုံး တပြိုင်နက် အတူကျဆုံးခဲ့ရသည်ကို ယခုထက်တိုင် အံ့သြဝမ်းနည်းနေကြရပါသည်။)
တစ်ယောက်က မွတ်စလင် အစ္စလာမ်၊ တစ်ယောက်က ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သော်လည်း မင်းက ဘယ်ဘာသာ ငါက ဘယ်ဘာသာဟူ၍ ဘာသာနှင့်စပ်၍ မပြောခဲ့စဖူးဟု သိရ၏။ မြန်မာပြည်သားပီပီ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေး ရရေးကိုသာ တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ခဲ့ကြသော ခေါင်းဆောင်ကြီးများဖြစ်၍ ထိုခေါင်းဆောင်ကြီး နှစ်ဦးအပါအဝင် အာဇာနည်မြောက်များ စွာတို့ အသက်ပေး ချွေး သွေးဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော လွတ်လပ်ရေး ပန်းတိုင်အောက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ရဟန်းရှင်လူပြည်သူများစွာ ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်ကြသည်မဟုတ်ပါလော။ ထိုသို့ ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်စဉ် “သခွပ်ပင်က မီးတကျည်ကျည် မဖြစ်ကြပါနဲ့၊ မလုပ်ကြပါနဲ့” ဟူ၍ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးအနေဖြင့် တောင်းပန်စကားပြောကြားရင်း လွတ်လပ်ရေးမဆုံးရှုံးစေရေး ကို သတိပေးလိုက်ရပါသည်။
Tags: Aung San Suu Kyi, Buddhism, Burma, Business, Meiktila, Muslim, National League for Democracy, Tin Oo
This entry was posted on March 30, 2013 at 12:18 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.